Dadkii ka barakacay Magaalada Gaalkacyo oo dhibaato la soo deristay – STAR FM SOMALIA
Dhibaato dhinaca nolosha ah, ayaa la soo deristay dadkii ku barakacay dagaalada toddobaadkii hore ka soo cusboonaaday Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Inta badan dadka ka barakacay Magaalada Gaalkacyo, ayaa gaaray deegaanada hoos-tagga magaaladaasi, waxaa kaloo jira kuwo kale oo gaaray magaalooyinka dalka qaarkood, sida deegaanada ay ka kala arrimiyan Puntland & Galmudug.
Dadkan, ayaa dhibaatada ugu badan ay ka cabanayan waxaa laga tilmaami karaa hoy la’aan, biyo nadiif ah oo aysan haysan iyo iyadoo ay ku adag tahay in halkaasi ka hellaan adeegyada daruuriga ah, ee ay u baahan yihiin.
Marka laga soo taggo dadka ka barakacay labada daamood ee Magaalada Gaalkacyo, ayaa waxaa kaloo jira kuwo ka barakacay xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaaladaasi, kuwaa oo gaaray deegaanada ku teedsan Gaalkacyo.
Qoysaska barakacayaasha qaarkood oo gaaray Deegaanka Bali-abaar oo ku dhow Magaalada Gaalkacyo, ayaa waxaa halkaasi ku haysata dhibaato dhinaca hoyga ah.
Billaad Maxamed Sugule oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee gaaray Bali-abaar, ayaa waxay sheegtay inay qabaan dhibaatooyin badan, haba ugu horeysee hoy iyo biyo la’aan.
Billaad oo ah hooyada afar carruur ah, ayaa Laanta afka Somaliga ee BBC u sheegtay inaysan jirin cid wax gurmad ah ku gaarsiisay deegaanka ay ku sugan yihiin.
Maamulada Galmudug & Puntland oo ku hardamaya Magaalada Gaalkacyo, ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay iyagu ka masuul yihiin barakicinta dadka rayidka ah.
Odayaasha Gaalkacyo oo markale isu taagay nabadda Magaalada Gaalkacyo